Farihy Batur (Danau Batur) any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Lake Batur (Danau Batur)
Farihy Batur (Danau Batur) any Bali
Farihy Batur ao amin'ny kalon'ny volkano. Fijery zanabolana
Topimaso ny farihy Batur
Io no farihy lehibe indrindra any Bali. Any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny nosy (faritra Kintamani) no misy azy. Batur no farihy lava vava lehibe indrindra manerantany. Ny halavany dia sahabo ho 8 km, ny sakany dia 3 km, ary ny halaliny dia mahatratra 70 m.
Any amin'ny faritra iva no misy ny fitahirizana. Amin'ny lafiny atsimo, avaratra ary atsinanana dia voahodidin'ny tandavan-tendrombohitra izy - ny sisin'ny kaldera. Misy volokano eo amin'ny ilany andrefana. Misy tanàna manamorona ny morontsiraka rehetra. Tsy eo akaikin'ny morontsiraka avaratra ihany izy ireo no tsy eo, satria tendrombohitra mideza no miakatra avy amin'ity lafiny ity, izay midina ambanin'ny rano.
Misy teoria sy angano maromaro momba ny niandohan'ny Farihy Batur. Raha ny filazan'ny mpahay siansa dia ny ranonorana no tena anton'ny fananganana ny fitahirizana azy, izay niangona tao amin'ny kaldera teo ambany. Mino ny mponina eo an-toerana fa loharano anaty rano 11 no entin'i Batur, izay tsy mihena ny haavon'ny rano ao amin'ity farihy ity. Marina ity farany - na dia mandritra ny haintany lehibe indrindra aza, dia mitazona ny fikorianany feno ihany ilay farihy. Ankehitriny ny totalin'ny rano rehetra ao anaty farihy dia mahatratra 815 tapitrisa metatra toratelo. M.
Ny fipoahan'ny volkano dia manome ny fahavokarana goavana amin'ny tany manodidina an'i Batur. Noho izany, ny vokatra dia jinjaina eto indroa, na in-telo isan-taona aza. Betsaka ny toeram-piompiana manodidina ny farihy hambolena voatabia, laisoa, kôkômbra, dipoavatra ary legioma hafa.
Ny halavirana mankany Batur avy any Denpasar dia manodidina ny 67 km, izay voasarona amin'ny arabe mandritra ny adiny 2. Afaka mandeha any ianao amin'ny alàlan'ny fitateram-bahoaka sy ny olona tsirairay.
Ny farihy dia miorina amin'ny haavo 1050 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina any avaratry Bali any amin'ny faritr'i Kintimani, ao amin'ny kalon'ny volkano Batur.
mandrindra: -8.256359, 115.408802
Lake Batur amin'ny sari-tanin'i Bali
Caldera an'ny volkano sy ny farihy Batur ao